Indlela abaphefumlelwe ngayo ukuba benze ii-superheroes | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJose Angel | | Abadlali, ngokubanzi
Xa uqala incwadana okanye idayari, sicinga amawaka ezinto oza kusebenza nazo. Ukuba sizama ukwenza amabali okanye imizobo, sijonga umlinganiswa omtsha. Sifuna kwaye siyakholelwa ukuba iyakuba yibhombu ukuba sifuna njalo. Kwaye ekugqibeleni sifuna ukuba imizobo yethu engaqhelekanga ibeyimbali yomdlalo bhanyabhanya. Yiloo nto abayili abenza amagorha edume kakhulu kufuneka ukuba wayecinga. Ukubaguqulela kwiikhomikhi esizithandayo ngoku.
Uninzi lwazo sele lusaziwa kuthi kwaye sizibona ziqheleke kangangokuba zibonakala zilula. UBatman, nabani na uyazi ukuba uyilulwane, i-spiderman sisigcawu kwaye 'i-panther emnyama' i-panther emnyama. Le yimizekelo yento esiza kuyibona apha nendlela abaphefumlelwe ngayo yinto namhlanje ebonakala ilula.
2 Eda ucacise kutheni oku kuyimpazamo
3 Umnyama omnyama
I-Spider-Man yaqala ngoBumnandi obumangalisayo # 15 ngo-1962. Yenziwe nguStan Lee noSteve Ditko. Kungekudala isimilo sakhe sahlengahlengiswa kwimithombo yeendaba eyahlukeneyo. Apho umculo obiza kakhulu kwi-Broadway ukuza kuthi ga ngoku ubandakanyiwe, uSigcawu-Mntu: Cima uMnyama.
Ukuphefumlelwa kwesuti se-Spider-Man kwavela kumthombo ongenakulindeleka. Uninzi lukholelwa ukuba isinxibo esanxitywa ligorha eliyimbalasane sasikhuthazwa sisinxibo sabantwana baseHalloween sowe-1954 esenziwe nguBen Cooper Inc. uSpider-Man wahlukile kuba ngaphambi kweminyaka yama-1960, abalinganiswa beencwadi ezikwishumi elivisayo babedla ngokufakwa kwindima. UStan Lee akazange avumelane nalo mthetho-siseko kwaye wabeka uxinzelelo olukhulu kuluntu ophambili kulutsha.
Umfazi oMangalisayo lelona heroine lidumileyo ngalo lonke ixesha kwaye ibelisithsaba sobufazi ukusukela ngo-1941, xa wenza amabala akhe kwi-All-Star Comics # 8. Yenziwe nguWilliam Morton Marston kwaye yafaniswa emva komfazi omtsha onobukroti.
Umfazi omangalisayo uyathandwa ngenxa yesantya namandla akhe angaphaya kwawomntu, izacholo zebhulethi kunye neGolide yakhe yeLasso yeNyaniso emnceda ukuba alwe nentiyo kwihlabathi lethu. Wayephefumlelwe ngokuyinxalenye ngamaphepha amaziko e-Varga Girl e-Esquire abonwa nguMarston njengo "erotic" kunye no "cosmopolitan." Iwadi yakhe yayikhuthazwa ngumdla kaMarston kubugcisa qhosha phezulu inkanuko, njengoko wayefuna ukubonakala kwakhe njengowesifazana ukuba ancede ekulweni ubudoda obunamandla babanye oonobumba abahlekisayo.
I-Black Panther yaqala ukubonakala kwi-Marvel's Fantastic Four No. 52 ngo-1966. Wayengumntu wokuqala omnyama omlinganiswa wencwadi.. Yenziwe nguStan Lee noJack Kirby. Ngokwombhali uStan Lee, igama lomlinganiswa lisekwe kwiqhawe lobuchwephesha elinomphathi omnyama njengomncedisi. Umbono wobugcisa wokuqala wawubizwa ngokuba yi "Charcoal Tiger."
Malunga neenyanga ezintathu emva kokuba uphawu lweBlack Panther luqale ukubonakala kwindalo engummangaliso, iBlack Panther Party yabanjwa. e-Oakland, California. Nangona kunjalo, ilogo yeBlack Panther evela kumbutho ongaphambi kwakhe, i-Lowndes County Freedom Organisation, yaveliswa unyaka ngaphambi kokukhululwa kwe-comic.
Uqhwithela lwenziwa nguLen Wein kunye noDave Cockrum. Waqala ukubonakala kwindalo emangalisayo kwiGiant Size X-Men # 1 ngo-1975. Umlinganiswa wabhalwa nguLen Wein kwaye wazotwa nguDave Cockrum. Ekuqaleni yayenzelwe ukuba ligorha eliyindoda, isiqhwithi sisekwe kubalinganiswa ababini abohlukeneyo ababeza kuba yinxalenye yeLegion of Superheroes comic: iTyphoon neBlack Cat.
Isaqhwithi yenye yezona zinto zibalulekileyo nezibalulekileyo zamagorha amnyama. Yiyo loo nto ebalulekile kwibali le-X-Men ukusukela ekuqaleni kwakhe. Ukwangomnye wamagorha anamandla kwindalo emangalisayo.
Emva kokuphumelela kukaSuperman, iiComics zeDC zazifuna ukwenza iqhawe elitsha. Oku kwagunyaziswa ngumbhali wencwadi yamahlaya kunye nomculi uBob Kane kunye nomlobi uBill Finger ukuphuhlisa enye. Oku kukhokelele ekuzalweni kukaBatman, igorha elingenamandla angaphezu kwawemvelo, kodwa endaweni yoko lalineentlobo ngeentlobo zezixhobo ezinomdla, kubandakanya nebhanti yezixhobo kunye noxinzelelo. UBatman wabonakala kuqala kwi-Detective Comics # 27 ngo-1939.
UBatman waphefumlelwa ngokudityaniswa kukaSherlock Holmes, uZorro, kunye nomzobo kaLeonardo da Vinci ngomatshini ophaphazelayo onamaphiko ebhet. Abadali bakwakhuthazwa nguDracula kunye neBat, ifilimu engathethiyo yowe-1926.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Indlela abaphefumlelwe ngayo ukuba benze ii-superheroes